Snap Shot @ Myanmar Motion Picture Academy 2009 | Myanmar Celebrity Gossip & News
Snap Shot @ Myanmar Motion Picture Academy 2009
အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆုရှင် ဒါရိုက်တာ ဇင်ယော်မောင်မောင်
အကောင်းဆုံး ဇာတ်ညွှန်းဆုရှင် မြင့်ဦးဦးမြင့်
အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆုရှင် ဒါရိုက်တာ မီးပွား
အကောင်းဆုံး ဇာတ်ဆောင် မင်းသားဆုရှင် နေတိုး
စိုးမြတ်သူဇာ တို့ ညီအမတွေ
သက်မွန်မြင့် ရဲ့ အလှ
၀တ်မှုန်ရွှေရည် ရဲ့ ချစ်စရာ အလှ
ရဝေအောင် ရဲ့ ပွဲတက် ဖက်ရှင်
အကောင်းဆုံး ဇာတ်ပို့ ဆုရှင် စိုးပြည့်သဇင်
Myanmar Motion Picture Academy Awards 2009 Presentation Ceremony was held on 23 January 2001 at Naypyidaw. Here is the list of Winners for Year 2009 Academy Awards; The Best Lead Actor Award = Nay Toe (Moe Nya Eain Myat Mu)
The Best Best Supporting Actress Award = Soe Pyae Thazin (Moe Nya Eain Myat Mu)
Photos From Facebook and Picasa. Celebrity Photos
hninJanuary 24, 2011 at 11:04 AMhappi for ko nay toe..iloveyuReplyDeleteahleeJanuary 24, 2011 at 12:38 PMCongratulation Nay toe and soe pyae Thazin.I would like to say Myint Myat.I am sure you can get too.You are good actor.I like you more than Nay toe.ReplyDeletenyimaJanuary 24, 2011 at 3:42 PMYay.. soe pyae thazin.. congratsReplyDeletesengJanuary 24, 2011 at 7:06 PMwhy they give soe pyae thazin?she is not very well.ReplyDeletebad galJanuary 24, 2011 at 8:41 PMyes, why did they give to soe pyae thazin?her action is just normal.ReplyDeletemumulayJanuary 24, 2011 at 10:16 PMစိုးပြည့် နဲ့ကိုနေတိုးနဲ့ ရတာကျင်နပ်တယ် ၀မ်းသာတယ် ဆက်ပြီူကြိုးစားပါ နောက်လဲအားပေးနေမယ်ReplyDeletethuzarwJanuary 25, 2011 at 10:26 AMကောင်းပါတယ် ..ကျေနပ်တယ် အားကျတယ် အားပေးနေတယ် ...ReplyDeletedaJanuary 25, 2011 at 1:48 PMwhatever peoples say i don't care,but soepyae is my favorite i like the way she acting and performances she's deserve to win.Congratulation for your successful.Let's hope the best and keep the confidence and faith.Fighting!soepyaeReplyDeletewah2January 25, 2011 at 5:13 PMဓာတ်ပုံမူပိုင်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တခုလောက်ပြောပါရစေ။ဒီပုံတွေအားလုံးကို ဆိုက်အက်မင် က ဦးဝင်းငြိမ်းရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်က ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့နာမည် ဖော်ပြသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ReplyDeleteAdd commentLoad more...